🥇 ▷ Xiaomi Mi A2 Lite rasmi ah: mataanaha kala duwan waa ka raqiisan yahay, oo leh batteriga graphene waxayna leeyihiin feejignaan! (sawir) ✅
Xiaomi Mi A2 Lite rasmi ah: mataanaha kala duwan waa ka raqiisan yahay, oo leh batteriga graphene waxayna leeyihiin feejignaan! (sawir)
Jiilka labaad ee aadka loo qiimeeyo ee Android One Xiaomi labanlaab. Dhab ahaantii waxaa garab socda I A2 halkan ayay ka dhigeysaa kulankeedii ugu horreeyay Mi A2 Lite, taleefoon magaca ku dhiirrigelinaya moodel kale oo maanta la soo bandhigay laakiin taasi runtii a terminal kala duwan.
Farqiga u horeeya waa midka ugu muuqda: Mi A2 Lite dhab ahaantii waxaa lagu gartaa feejignaan dhinaca kore ee shaashadda. Dhabarka dambe ma leh faahfaahin gaar ah marka la barbar dhigo A2 iyo Lite sidoo kale waa a Android Mid; Kala sooca ayaa dib loo xoojiyaa si loo qodo qolofta hoostiisa.
AKHRISO: Xiaomi Mi A2, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Xaqiiqdii, way isbedelayaan processor, si kastaba ha noqotee taxanaha Snapdragon 600, the qaybta sawirka iyo goynta xusuusta waa RAM. Qaybaha Lite waa hubaal inay ka hooseeyaan Mi A2 laakiin waxaa jira yaab yaab leh.
Batteriga taleefankan casriga ahi wuxuu ka socdaa 4,000 mAh oo leh teknolojiyadda graphene (si fiican loogu faafiyo heerkulka) kaas oo, sida uu sheegayo Xiaomi, ay tahay inuu dammaanad qaado illaa laba maalmood oo iskii ah. Sida la filan karo wararka xanta ah iyo sida walaalka weyn, Mi A2 Lite sidoo kale waxaa loo qaybin doonaa Yurub, Talyaaniga waxaa ka mid ahaa. La soco dhammaan faahfaahinta.
Shaashadda: 5.84 ″ buuxa HD + (1.080 x 2.280 pixels) 19: 9
Xusuusta gudaha: 32 GB | 64 GB waa la fidin karaa ilaa 256 GB (oo loo maro microSD)
Rear camera: laba kamarad 12 mpx (f / 2.2, 1.25 μm pixels) oo leh PDAF + 5 mpx, AI sawir sawir
Kaameera hore: 5 megapixels
Battery: 4,000 mAh, oo leh tikniyoolajiyadda graphene
SO: Android 8.1 (Android One)
cabirrada: 151.1 x 71.5 x 8.36 mm
Miisaan: 170 g
Isku xirnaanta: Independent Dual SIM (3 boos, microSD + dual SIM), Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11a / b / g / n, band 20, GPS, AGPS, GLONASS, Beidou
Ku kale: akhristaha faraha faraha gadaal
Midabada: Madow, buluug, dahab
Bartilmaameedka adag ee taleefankan waa hubaal baytariga kuwaas oo, sida aan soo sheegnay, isku daraa tikniyoolajiyadda graphene. Shayga gaarka ah ayaa lagu isticmaali lahaa nooc “go’yaal”; kuwani waa inay horumariyaan kala-baxa kuleylka sidaa daraadeedna hufnaanta hanti aruuriyaha. The sirta ee dheer madax-bannaanida (ugu yaraan mid lagu dhawaaqay) sidaa darteed maahan kaliya karti.
Xiaomi Mi A2 Lite – Siideyn iyo qiime Talyaani ah
Sida ku xusan furitaanka furitaanka Mi A2 Lite ayaa loo qaybin doonaa Talyaaniga. The qiimaha hordhaca ah waa 189 € kuwa doorsoomaha ah 3 + 32 GB, halka taas 4 + 64 GB waxay ku kici doontaa € 229.90. Imaatinka halkaan ayaa horeyba loo dejiyey, iyadoo uu dhacayo dhowr toddobaad gudahood: the8-da Agoosto dul Amazon, MediaWorld, Unieuro, Dabeyl Tre, DML, Trony iyo Khabiir.
KA HORTAGA: Xiaomi Mi A2 Lite
Cusub iibsashada ugu fiican gudaha dhamaadka dhamaadka? Kahor intaanu nafteena sheegin, waa inaanu gacanta ku sugno tijaabooyinka ugu horreeya, laakiin dhismayaashu waxay umuuqdaan kuwo rajo leh. Inta aad sugeyso dib u eegis dhab ah, ha seegin muuqaalkayagii hore ee aan isla markiiba sameynay ka dib dhacdada bilowga.
Xiaomi Mi A2 Lite – Sawirro